Kenya: Digniinaha reer galbeedka ayaa na dhibay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Dowlada Kenya ayaa sheegtay in ay ka walacsan tahay digniinaha isdabajooga ah oo kaga imaanaya wadanka Britain iyo qaar kale oo mid ah dalalka reer Galbeed, taasoo ku aadan digniin xagga amaanka ah .
Dowlada Ingiriiska ayaa dhawaan soo saartay digniin muwaadiniinteeda ay u jeedinayso oo ah in aysan u safrin goobaha loo dalxiis tago ee xeebaha ku yaal dalka Kenya, sababo la xiriira in Alshabaab ay weeraro halkaasi ka geystaan, taasi oo Kenya ku tilmaantay mid hoos u dhigtay adeegyadii ganacsi ee dalkeeda.
Josef Niyakaseri oo ku hadlayay magaca dowlada Kenay oo shirjaraa’id ku qabtay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayaa sheegey in ay ka walacsanyihiin fariimaha Beesha Caalamka ka soo baxaya.
Marka laga soo tago diginiinaha reer Galbeedkla Dowlada Kenya ayaa muujinaysa in hay’adaha maanka dalkeeda ay si weyn u sugayaan amaanka dalka isla markaana horumaro dhanka amniga ah ay jiren bilihii ugu dambeyeey.
Wadamada muwaadiniintoodi uga digay in ay u safraan Kenya waxaa kamid ah wadamada Ingiriiska, Australia iyo wdamo kale hasa yeeshee Kenya ayaa ku adkeysanaysa in amaankeeda ay ka taxadirtay.
Kenya ayaa u muuqata iney dhibsatay digniinaha xagga amaanka ee ay dhowrkii bilba mar soo saaraan qaar ka mid ah dalalka reer Galbeedka, iyagoo muwaadiniintooda uga diga ineysan u safrin Kenya.